Beesha Reer Haaruun iyo Afar Doqon oo Isugu Yimi Waxay ka Yeeli Lahaayeen TV Universal – Rasaasa News
Oct 27, 2009 Jwxo-shiilada, Jwxo-shiilo
“Dameertii Geela didisay iyadaaba bururuf leh” waa arin la yaab leh oo aan abid ina soo marin, gardarada dadkii gaystay ayaaba budh la galdaasaya oo dadka ku haliilaya, calaashaan sideebaaba loo hadli karaa, waa hore ayey dad hubsadeen……
War aanu ka helay London, UK, ayaa waxaa la sheegayaa in beesha reer Haaruun ay aad uga cadhootay Barnaamijikii uu TV universal siidaayey Khamiistii hore, kaas oo ay lacag xoog leh ku bixiyeen in lagu waraysto Jwxo-shiil. Xubnaha beesha ayaa waxay diyaariyeen haween buraanbur amaan ah oo ku saabsan Jwxo-shiil TV dhexdiisa ka siidaaya, wayse noqon wayday sidii ay moodayeen oo TV-guna dadkii ugu soo hormaray ayuu siiyey khadka Telephone-ka. Arintaas oo beesha Jwxo-shiil, ay ka cadhootay, kolkii dambena ay TV u diideen in uu siidaayo barnaamijka oo sida caadiga ah ku celis looga siidayn lahaa TV Universal.
Hadaba, tan iyo intii ay arintaani dhacday ayey beesha Jwxo-shiil, waxay la seexan la yihiin xanuun ah sidee ayanaan uga buraanburin TV. Waxaana shalay isugu yimid beesha oo ayna gabadhi ka maqnayn “habari waa dad dabool waa weel”.
Hadab, shalay ayey beeshu shir isugu timid iyada oo aad u cadhaysan, waxayna ka cadhaysan yihiin su,aalihii la weydiiyey Jwxo-shiil oo ay lee yihiin sidee baa su,aalahaas loo waydiin karaa Jwxo-shiil. Aduunow xaalkaa ba,a beesha Jwxo-shiil waxay la seexan la dahay su,aasha la weydiiyey, isagana waxaa ku maqan shakhsi caqoon Dr ka gaadhay, kuna magac bixiyey Jabhada maanta laga fujin la yahay Jwxo-shiil, garashan Eebahay galiyey, waxaase la yaab leh in beesha uu ninkaasi ka maqan yahay ayna ogayna.
Shirka, ay beesha Jwxo-shiil isugu timid oo ka dhacay meel u dhaw guriga uu Jwxo-shiil degan yahay, ayaa waxay aad ugu soo hadal qaadeen dadkii su,aalaha weydiiyey Jwxo-shiil, iyaga oo is tusay in ay waxyeelo u gaystaan iyaga oo adeegsanaya magaca Jabhada, sida ay awal horeba sameeyeen.